Hadduu imaan lahaa Lik Wan Yew Soomaali ah | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Hadduu imaan lahaa Lik Wan Yew Soomaali ah
Hadduu imaan lahaa Lik Wan Yew Soomaali ah
Muqdisho – Kan nasiibka u yeesha in la yiraahdo Madaxweyne Jaalle Hebel kadib loolan dheer, kaligiis sooma marin fursaddan oo kale. Waxaa kaga horreeyey kuwo hore; hubaalna waxaa kaga danbeynaya kuwa kale.
Previous: Muuqaalka Muqdisho iyo Miisaanka Doorashada.
Next: Hoggaamiyaha loo baahan yahay!